PressReader - Isolezwe: 2018-07-12 - Isibhuda sihlomisane ngamasu okutakulana
Isibhuda sihlomisane ngamasu okutakulana
Isolezwe - 2018-07-12 - EZOMNOTHO - ZANELE MTHETHWA
BACEBISANE ngezindlela zokusimama amabhizinisi abesifazane abebehambele ingqungquthela ebizwa ngeTop Women ehlelwe iStandard Bank eThekwini muva nje.
Le ngqungquthela ihlelwa yileli bhange ukuze abesifazane babonisane kwezamabhizinisi, bahlomisane nangamasu okuphumelela. UNksz Thabisa Nkanzela oyiNhloko yezeziMali kwaStandard Bank, uthe inselelo enkulu esabhekene nabesifazane ukungalingani ezindaweni zokusebenza. Uthe ngisho ezinkampanini akulingwana ngoba izikhundla eziphezulu zisaphethwe ngabesilisa.
Uthe bayakholelwa kakhulu emabhizinisini abesifazane ngoba bayingxenye yokufukula umnotho. Uveze ukuthi banezinhlelo zokuxhasa abesifazane ngemali yokuqala amabhizinisi nokuwathuthukukisa.
Phakathi kwezikhulumi ezishiyelane inkundla kubalwa uNkk Kgomotso Ndungane ongumnikazi we-Oak Celebrations, okuyibhizinisi elihlela imicimbi esezingeni lomntakabani. UNkk Ndungane ushade nowayengumdlali weRugby u-Odwa Ndungane. Uthe ibhizinisi waliqala emuva komshado wakhe akhetha ukuzibambela ekuwuhleleni ngoba efuna okwehlukile.
“Ngangiwumuntu osebenza kwezobuchwepheshe ngingazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyongena ebhizinisi lokuhlela imicimbi. Engikufundile ebhizinisini ukuthi kudingeka ukubekezela nokuhlela kahle izinto zakho. Kumele ungazenzi into ongeyona, uzame ukufana nabanye,” echaza.
Umsakazi weGagasi FM, uNjabs Zwane, ukhulume kabanzi ngokubaluleka kokuziphatha ngendlela ezokwenza abantu bakholelwe ebhizinisini lakho. Lo msakazi othe usemenywa ukukhuluma emicimbini ehlukene, uthe wonke umuntu osebhizinisini kumele abe nendlela aziveza ngayo emphakathini.
“Ayikho inkampani ebaluleke njengawe uqobo. Kumele ucabange kahle ukuthi ufuna ukuziveza njengomuntu onjani emphakathini, ngisho indlela ogqoka ngayo. Kumele uhluke kwabanye abantu futhi ugqame ngokuhlukile,” kusho yena.
Ukhulume ngamaphutha awenza ngendlela yokuziphatha engakaziqondi ukuthi ufuna ukuziveza njengomuntu onjani. Ulinganise ngokuthi kubalandeli bakhe ezinkundleni zokuxhumana ubekhuluma isiNgisi esiqinile akhohlwe ukuthi ulandelwa nangabakhuluma isiZulu njengoba enza naye emsakazweni.
Uyale osomabhizinisi ngezinkundla zokuxhumana, athe zingalifukula futhi zingaliwisa ibhizinisi nesithunzi somuntu.
Uhlelo lwale ngqungquthela beluphethwe nguNksz Zama Phakathi oyale abesifazane ukuthi bangathembeli kuphela emisebenzini yamathenda ngoba ayaphela. Uthe yize naye ewuthola umsebenzi wamathenda kodwa kumsizile ukuba nelinye ibhizinisi elizimele ukuze angawi.
Isithombe: THOKOZANI MBUNDA/ANA
BAHLOMISANE ngamasu amabhizinisi abesifazane engqungqutheleni ebizwa ngeTop Women okubalwa uNksz Thabisa Nkanzela oyiNhloko yezeziMali kwaStandard Bank, umsakazi weGagasi FM uNjabs Zwane noNkk Kgomotso Ndungane onebhizinisi i-Oak Celebrations
ESITHOMBENI nguDkt Brian Armstrong, Nkk Palesa Phili, uNksz Eleni Kwinana noMnuz Mohammed Taahir Shah abebecobelela intsha ngolwazi lwamabhizinisi kwiYoung CEO’s Breakfast